Ị nwere ike igosi m otu ị si agba mbọ ịkwọ ụgbọala na ndepụta aha Amazon gị?
Ọ bụrụ na ị ka na-eche ma chọọ ịghọta otú ị ga-esi na-ebugharị ụgbọala gị na ndepụta Amazon gị, mgbe ahụ ọ ga-abụrịrị na ị na-eme onwe gị ka ị nwee ihe ịga nke ọma. Ka anyị chee ya ihu ozugbo - ihe mgbaru ọsọ gị kachasị mma bụ ịkwado maka isi isiokwu (ma ọ bụ okwu mkpịsị ogologo oge) dị ka ihe kachasị elu nke e nyere maka ire ere. N'ezie, ọ dịghị ụzọ ọzọ ị ga-esi na-ebugharị ụgbọala gị na ndepụta Amazon gị, ọ gwụla ma ị gafere n'ụzọ dị mma site na usoro nhazi nke isiokwu nyocha. N'ikwu ya n'ụzọ doro anya, ịkwesịrị ịtọ ndepụta ngwaahịa gị ma bulie ya maka isiokwu ndị ziri ezi nke ndị ahịa na-azụ ahịa na-ejikarị eme ihe ka ndị gị wee nwee ihe ha na ya, ya mere ọ bụ nke kachasị elu.
E nwekwara ọtụtụ ngwaọrụ iji nyere gị aka. Ma, m n'onwe m hụrụ ngwọta kachasị mma. N'okpuru ebe a, m ga-akọrọ ụfọdụ n'ime ahụmahụ m gara aga ka ị mara n'ụzọ doro anya na ị ga-esi ụgbọala ụgbọala gị na ndepụta Amazon gị - na ntuziaka dị mkpirikpi na dị mfe. E wezụga nke ahụ, ị ​​gaghị akwụ ụgwọ otu penny, naanị n'ihi na m na-etinye aka na ngwa ngwa ochie nke ngwa ngwa ndị ọkachamara nchịkwa ụwa nyere site na ndabara. Ọfọn. Echere m na taa m na-egosi gị na ihe agadi na-arụ ọrụ, bụ nke e mechara ihe dịka afọ ise gara aga ka ọ dị ka anyị maara ya taa.
Malite Usoro Nyocha na Isi Ihe Ntube Ihe
Nke a bụ otu esi akwọ ụgbọala okporo ụzọ gị ngwaahịa ngwaahịa Amazon - Ana m akwado ịnweta kickstart naanị iji Google Resource Planner tool. Ihe mbụ ị ga-eme iji mezue ọrụ a abụghị onye na - enweghị ihe ọ bụla - ihe niile ị chọrọ bụ ịbanye isiokwu dị n'ime ebe a chọrọ igosi ndepụta nke isiokwu ndị metụtara ya. Echefula na, ị ga-achọ site na Isi Ntuziaka (ọ bụghị Adgroup ideas!).
Nke a bụ data kachasị mkpa ị ga - enye ya ọbụna nlezianya kachasị anya:
Okwu site na ntinye aka - na - anọchite anya ndepụta ndị dị n'elu Ebumnuche nke mbụ wepụtara site na Google Resource Planner Tool. Ọ bụ ya.
Nkezi Ọnwa Ogologo Mpịakọta - N'ezie, ụda olu ahụ dị na Amazon abụghị ihe ijuanya otu ihe ị o yikarịrị ka egosipụtara gị na onye enyemaka Google a. Ka o sina dị, ọnụ ọgụgụ ndị ikwu a ga-abụrịrị nke ọma maka ịmara otú ị ga-esi na-ebugharị ụgbọala gị na ndepụta Amazon gị site n'itinye mkpụrụ okwu ziri ezi ụzọ.
Akwadoro na ị kwadoro na asọmpi - nweere onwe gị ịchụpụ akụkụ a ma ọ bụrụ na ị bụ ebe a. Ma, ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ weebụsaịtị, ị ga-amata na ogidi ndị a ezubere maka mgbasa ozi Mgbasa ozi AdWords enweghị ihe ọ bụla metụtara ngwaahịa gị na Amazon. Otú ọ dị, nyere na ị bụghị onye na-agagharị ebe a, ngalaba a nwere ike ịghọ ihe bara uru maka gị. Ekwuru m na ọ ghaghị inwe data bara ezigbo uru, n'ezie, ma ọ bụrụ na ị dị njikere ịkwọ ụgbọala okporo ụzọ karịsịa ụgwọ gị na ibe gị Source .